စပိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီအဆင့်မြင့်အရာရှိရဲ့မိသားစုတွေ ပစ်မှတ်ထားခံနေရ
စပိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီအဆင့...
25 พ.ค. 2563 - 22:28 น.
ရေးသူ - ဖရန့် ဂတ်(ဒ)နာ
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်
အိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟာမက် ဘင် ဆယ်လ်မန်ဟာ ဆော်ဒီရဲ့ အာဏာကို ကိုင်ထားတဲ့သူလို့ ယူဆကြ
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှာရှိတဲ့ ဗြိတိန် အမ်အိုင် ၆ ထောက်လှမ်းရေးဌာနနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဆိုင်ရာ စပိုင်အဖွဲ့တွေ ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိ တယောက်နဲ့ သူ့မိသားစုဝင်တွေဟာ နှိပ်ကွပ်တာတွေကြုံနေကြပြီဆိုတာကို အနောက်တိုင်းထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်။
အယ်ခိုင်းဒါး အဖွဲ့က အနောက်နိုင်ငံဆန့်ကျင်ရေး ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မယ့် အကြံအစည်တခုကို ဖြိုခွင်းနိုင်ဖို့အရေးမှာ အကူအညီတွေပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ဆဒ် အယ် ဂျက်ဘရီ ဟာ ဆော်ဒီကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်တုန်းက ပြည်ပကို ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်၊ အာဏာကိုင်ထားတဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟာမက် ဘင် ဆယ်လ်မန်က သူ့ကို မဖြုတ်နိုင်လေးခင်မှာ လက်မတင်လေးထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့တာပါ။ အခုတော့ သူ့ အကြီးဆုံးသား ခါလစ် ဆီက သိရတာကတော့ ဆာဒ် အယ် ဂျက်ဘရီရဲ့ သားသမီးတွေကို "ဓားစာခံတွေ" လို ဆော်ဒီမှာ ထိန်းသိမ်းထားခံနေရပြီ ဆိုတာပါပဲ။
"အိုမာ နဲ့ ဆာရာတို့ဟာ မတ်လ ၁၆ ရက် မနက်အရုဏ်တက်လောက်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခေါ်ဆောင်သွားတာခံရတယ်၊ ကားပေါင်း ၂၀ လောက်နဲ့ အစိုးရလုံခြုံရေးအရာရှိ ၅၀ လောက်ရောက်လာပြီး သူတို့ကို သူတို့အိပ်နေတဲ့ ကုတင်တွေပေါ်ကနေ ဆွဲချခေါ်သွားကြတာ" လို့ သူ့တို့ရဲ့ အကို ခါလစ် အယ် ဂျက်ဘရီကပြောပါတယ်။
ရိယာ့ဒ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုရဲ့အိမ်တအိမ်လုံးလည်းအဲဒီတုန်းက အမွှေခံခဲ့ရသလို၊ အိမ်မှာတပ်ထားတဲ့ CCTV တွေက မှတ်တမ်း ကဒ်တွေကိုလည်း သိမ်းသွားပါတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ်အိုမာ နဲ့ ၂၂ နှစ်အရွယ်ဆာရာ တို့ဟာလည်း အဲဒီကတည်းက ဘယ်သူနဲ့မှဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ နေရာတခုမှာ ထိန်းသိမ်းထားတာခံနေရပါတယ်။
သူနဲ့သူ့အဖေတို့ ခိုလှုံနေထိုင်နေတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံက နေ ကျွန်တော့်ဆီကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ခါလစ်က ပြောရာမှာ ဘာဖြစ်လို့ သူတို့ကိုဖမ်းထားတာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို မိသားစုကို မပြောသလို၊ ဘာစွဲချက်မှလည်း တင်မထားဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သူက "သူတို့ ရှင်နေသေးလား၊ သေသွားပလားဆိုတာတောင် ကျွန်တော်တို့ မသိပါဘူး" လို့ပြောပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကို သူ့အဖေ ပြန်လာဖို့ ဖိအားပေးနိုင်အောင် သူတို့ကိုဖမ်းထားတာလို့ ခါလစ်က မြင်ပါတယ်၊ ဆော်ဒီကိုသာ သူ့အဖေပြန်သွားရင် ချက်ချင်းအဖမ်းခံရပြီး ထောင်ထဲရောက်မှာလို့လည်း သူစိုးရိမ်ပါတယ်။
"အဖေနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့ ကြိုက်သလို ဘာမဆိုအလိမ်အညာတွေ ထုတ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဖေ့က ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့သူပါ" လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဆာဒ် အယ် ဂျက်ဘရီရဲ့ မိသားစုနဲ့ သူနဲ့ အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေရဲ့ ပြောစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေပြောစရာရှိလဲလို့ ဘီဘီစီက မေးတာကို ဆော်ဒီအာဏာပိုင်တွေက ဘာမှပြန် မတုံ့ပြန်သေးပါဘူး။
ဆာဒ် အယ် ဂျက်ဘရီ ဆိုတာဘယ်သူလဲ
သူဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွေ တဝိုက်က အယ်ခိုင်းဒါး ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်မှုကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်လို့ ဂုဏ်တက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား မိုဟာမက် ဘင် နာရက်ဖ်ရဲ့ လက်ရုံးပါ၊ "မျက်လုံးငါးလုံး - Five Eyes" လို့ခေါ်ကြတဲ့ အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် နိုင်ငံတွေက ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရာမှာ သူက အခရာလူပါ။
သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ အနောက်တိုင်း ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတယောက်က ဒီ အချိတ်အဆက်ဟာ ၂၀၁၀ တုန်းက "ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ အကူအညီဖြစ်ခဲ့တယ်" လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ယီမင်မှာရှိတဲ့ အယ်ခိုင်းဒါးအဖွဲ့ဟာ အားပြင်းလှတဲ့ ဗုံးတလုံးကို ပရင်တာ မင်ဘူးတောင့်ထဲမှာ ဖွက်ထားပြီး ချီကာဂိုကိုပျံသန်းမယ့် ကုန်တင်လေယာဉ်တစင်းထဲမှာ ထည့်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီထောက်လှမ်းရေးက အယ်ခိုင်းဒါးထဲမှာ မြှုပ်ထားတဲ့ သတင်းပေးဆီကနေတဆင့် အမ်အိုင် ၆ က ဒီသတင်းကိုရလိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်က East Midlands လေဆိပ်မှာ အဲဒီလေယာဉ်ဆိုက်လာတဲ့အခါ ဗြိတိန် အကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က လေယာဉ်ထဲမှာ ဗုံးကိုရှာပြီး စနက်တံဖြုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ "တကယ်လို့သာ အယ်ခိုင်းဒါးကြံစည်ခဲ့သလို ချီကာဂိုမှာသာဗုံးကွဲရင် ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေ သေကြေသွားနိုင်တယ်" လို့ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တယောက်က ပြောပါတယ်။
"ဒေါက်တာ အယ် ဂျက်ဘရီဟာ ဆော်ဒီ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး စွမ်းအားတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်" လို့ ပြောသူကတော့ နောက်ထပ် အနောက်တိုင်း ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တယောက်ပါ။
"သူက ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဖိနှိပ်နည်းတွေနဲ့ ဝန်ခံခိုင်းတဲ့ စနစ်အစား ခေတ်မီတဲ့မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ၊ ကွန်ပျူတာအခြေခံတဲ့ အချက်အလက် ဒေတာ စုဆောင်းတာတွေ ကို အစားထိုးပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပါ"
"အတော်များများက စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်နိုင်တာတွေများနေပြီးတော့ သူကတော့ တကယ့်ကို အထက်မြက်ဆုံးသူတယောက်ပါ" လို့ သူကပြောပြပါတယ်။
အီဒင်ဘရာ တက္ကသိုလ်ကနေ ဥာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာနဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ ရခဲ့တဲ့သူ၊ စကားပြောရင်လည်း ညင်ညင်သာသာပြောတတ်တဲ့ ဒေါက်တာ အယ် ဂျက်ဘရီ ဟာ ဆော်ဒီမှာ ဝန်ကြီးအဆင့်အထိ ရာထူးတက်ခဲ့သလို၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် တာဝန်ယူခဲ့သူပါ။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၅ မှာ အဲဒီအခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်၊ ဘုရင် အဗ္ဗဒူလာ ကွယ်လွန်ပြီး သူ့ ဝမ်းကွဲညီအကိုဖြစ်သူ ဆယ်လမန် အာဏာရတော့ သူက သားဖြစ်သူ မိုဟာမက် ဘင် အယ် ဆယ်လမန် (MBS လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်) ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသား မိုဟာမက် ဘင် ဆယ်လမန်က ယီမင် ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဆော်ဒီကတပ်ကို ဝင်တိုက်ခိုင်းတဲ့ အမိန့်ချတော့ ဒေါက်တာ အယ် ဂျက်ဘရီက ဒီစစ်ပွဲကို ဝင်ပြီးရင် ပြန်ထွက်နိုင်မယ့် ထွက်ပေါက်နည်းလမ်း မရှိတဲ့အကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်ကနေ နောက် ၅ နှစ်ကြာလာတဲ့အခုအချိန်အထိ အကုန်အကျများပြီး ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာဖြစ်နေတဲ့ ယီမင်စစ်ကနေ ဆော်ဒီ ဘယ်ကနေ ပြန်ထွက်မလဲဆိုတာကို ရှာနေရတုန်းပါ။
သူ့ဖခင် ဘုရင်က ထောက်ခံပေးတာနဲ့အတူ ၂၀၁၇ တုန်းက မင်းသား ဆယ်လမန်ဟာ သွေးမထွက်တဲ့ နန်းတွင်း အာဏာသိမ်းမှု လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ထိပ်ဆုံးက ထီးနန်းလျာ ဖြစ်တဲ့ မင်းသား မိုဟာမက် ဘင် နာရက်ဖ် ကို ဖယ်လိုက်နိုင်ပြီး သူဟာ အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်လာပါတယ်။
အဖယ်ရှားခံရတဲ့ မင်းသားဟာ ဒီနေ့မှာတော့ ထိန်းသိမ်းထားတာခံနေရသလို၊ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဓနဥစ္စာတွေလည်း ထိန်းချုပ်ခံနေရပါတယ်။ သူနဲ့အလုပ်အတူလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်း ရာထူးတွေကနေ အဖယ်ခံရပါတယ်။ ဒေါက်တာ အယ် ဂျက်ဘရီ ကတော့ ကနေဒါကိုထွက်ပြေးကာ ခိုလှုံနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဆယ်လမန်က ဒေါက်တာ ဂျက်ဘရီဟာ တချိန်သူ့အာဏာကို လာခြိမ်းခြောက်န်ိုင်သေးတဲ့လူလို့ မြင်နေတယ် ဆိုတာကို အနောက်နိုင်ငံ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
သူတို့ထဲက တယောက်က "သူ့ကို ကြီးကြီးမားမားဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့လူ လွတ်နေတာမျိုး သူမလိုချင်ဘူးလေ" လို့ ပြောပါတယ်။
ဆော်ဒီအာဏာပိုင်တွေနဲ့ "သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်သဘောမထားပဲ" တွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာမှန်သမျှက ရေစုန်မျောခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် လူသိရှင်ကြားဖွင့်ပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ လို့ ဒေါက်တာ အယ် ဂျက်ဘရီရဲ့ မိသားစုက ပြောပါတယ်။
"ဒေါက်တာ ဆာဒ် ကိုဘက်ပေါင်းစုံ ခြိမ်းခြောက်မှု လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေတယ်၊ ဒါတွေကို (ကနေဒါ) အာဏာပိုင်တွေကလည်း အရေးတယူဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိတယ်" လို့ သူ့ရဲ့သား ခါလစ်က ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီအကျပ်အတည်းထဲကိုတွန်းပို့ခံနေရတယ်" "ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံချစ်စိတ် ရှိသူတွေပါ၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်၊ ဆော်ဒီနိုင်ငံ နာမည်ပျက်မှာ ကျွန်တော်တို့မမြင်လိုဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အိုမာနဲ့ ဆာရာတို့ အခုလို ပြန်ပေးဆွဲခံနေရတာမျိုးက အစိုးရဟာ ဗြောင်ကျကျ မိုက်ရိုင်း ရမ်းကားနေတယ်ဆိုတာကို ပြနေတာ" လို့ ခါလစ်က ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စပိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီအဆင့်မြင့်အရာရှိရဲ့မိသားစုတွေ ပစ်မှတ်ထားခံနေရ